Netizen Report: Miteraka Fitiavana Sy Fankahalana Amin’ny Aterineto Ny Krizin’ny Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2015 4:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, čeština , Français, русский, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Mpitsoa-ponenana ao amin'ny Garan'i Keleti ao Budapest, Septambra 2015. Sary avy amin'i Mstyslav Chernov tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 4.0)
Manome sombim-baovao iraisampirenena momba ireo fanamby, fandresena sy ireo vaovao malaza momba ny zo aterineto manerantany ny Netizen Report ato amin'ny Global Voices Advocacy.
Nivadika sisintany ho any amin'ny zo nomerika ny tantaran'ny mpitsoa-ponenana mirohotra ao Eoropa Andrefana mandao an'i Syria sy ireo firenena rotiky ny ady, satria nanjary iankinan'ny ain-dehibe ho an'ireo manavatsava mandeha an-tongotra amin'ny tany tsy mahazatra ny fidirana amin'ny tambajotram-pifandraisana no sady miatrika teritery tsy mitsaha-mitombo avy amin'ireo manam-pahefann'ny sisintany ao Eoropa Atsimo sy Afovoany. Amin'ny fandraketana an-tsarintany sy ireo fampiharana GPS, fitaovana ilaina hoan'ny olona hifaneraserana sy hamolavolana paikady eo amin'ny samy izy ireo ny tolotra fandefasan-kafatra sy ny tambajotra sosialy.
Ao Hongria, Serbia sy Alemaina, nandray fepetra tamin'ny fanomezana finday, fahana, sy fidirana amin'ny Wifi amin'ny alalan'izay fitaovana ilaina ho an'ireo mpitsoa-ponenana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao an-toerana. Niara-niasa tamin'ireo mpiara-miasa sy namana i Kate Coyer, mpampianatra fifandraisana ao amin'ny Oniversite Eoropeana Afovoany ao Budapest mba hitondra finday misy Wifi any amin'ny faritra be olona, miaraka amin'ny vatoaratra matanjaka sy vatoaratra fiandry amin'ny finday. Tamin'ny antsafa nifanaovana amin'ny New Scientist, nilaza i Coyer: “Tsy te-handahatra ny laharam-pahamehana amin'izay ilain'ny tsirairay aho, satria efa lasa tsatotsatoka sisa, fa miharihary anefa fa tena iankinan'ny aindehibe ny filàna ara-pifandraisana ary mila vononina isaky ny fotoana isian'ny fanambarana izany.”
Nivadika fankahalana ao amin'ny vondrona media sosialy sasantsasany ny adihevitra antserasera amin'ny firohotan'ny olona mankao Eoropa Andrefana, noho ny fisian'ireo mpanao politika alemà marobe ao an-toerana mahazo fandrahonana herisetra na hatramin'ny fandrahonana hovonoina ho faty mihitsy aza ho valin'ny asan'izy ireo amin'ny fandraisana ireo olona vaovao tonga ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo. Nitatitra ny solombavambahoaka Alemà Ozcan Mutlu, teratany Tiorka fa naharay hafatra izy izay milaza hoe: “Fotoana izao hanokafana an'i Auschwitz, Buchenwald, sns hiasa indray – izany no toerana misy anao Tiorka maloto!”
Hita ao amin'ny Facebook ihany koa ny disadisa mitovitovy amin'izany, ary niteraka fanakianana avy amin'ny mpiserasera sy mpitarika politika izay milaza fa tsy mba nanao zavatra hampihenana na mandray fepetra manoloana ireo fanehoan-kevitra fankahalana mikendry ny mpitsoa-ponenana ny orinasa. Nanambara drafitra fiarahamiasa amin'ny governemanta Alemà mba hamerana ny tenim-pankahalana sy ny fankahalana vahiny ao amin'ny tambajotran'izy ireo ny orinasa tamin'ity herinandro ity rehefa niresaka momba izany tamin'ny mpitantana ny Facebook ny Minisitry ny Fitsarana Alemà, Heiko Maas. Nanambara i Maas fa natsangana ny vondrokery manokana ahitana ny Facebook, ny Ministeran'ny Fitsarana, orinasam-pamatsiana Aterineto ary ny tambajotra sosialy hafa, ny hamantarana ireo votoaty feno fankahalana sy ny fanesorana izany haingana ao amin'ny sehatra no tanjona.
Mikendry hitarika ny fikambanana tsy miankina miompana amin'ny fahalalahan'ny media Ekoadaoriana ny manampahefana
Miatrika fanakatonana ny vondrona fahalalahan'ny media Ekoadaoriana Fundamedios noho ny filazana fa lasa mpanohana antoko politika izy. Nanomboka nanakatona ity fikambanana tsy miankina ity ny Sekreteran'ny Fifandraisana ao Ekoadaoro, ary nanome folo andro ny vondrona mba hiaro-tena alohan'ny fanapaha-kevitra farany. Tafiditra ao anatin'ny disadisa ifanaovana amin'ireo media mpitsikera nandritra ny taona maromaro ny filoha Ekoadaoriana Rafael Correa, nolaniana tamin'ny taona 2013 ny Lalànan'ny Fifandraisana be fameperana heverin'ny maro fa henjana indrindra ao amin'ny faritra. “Tsy afa-po amin'ny fanenjehana, fanorisorenana, fampandoavana onitra ary ny tratrevatreva atao amin'ireo mpanao tsikera ao amin'ny gazety tsy miankina ny governemanta Ekoadaoriana ankehitriny fa mandrahona ny handrava ny fikambanana mpandala ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety mpitari-dalana ihany koa “, hoy i Carlos Lauria, Komity Fiarovana ny Mpanao gazety ho setrin'ny vaovao
Iraniana mpiserasera Facebook nahazo fito trano an-tranomaizina tsy misy fombafombam-pitsarana
Anisan'ireo Iraniana mpikatroka ao amin'ny Facebook valo nosamborina tamin'ny taona 2013 i Shahsavandi Shirazi. Tamin'ny 2014, voampanga ho nanevateva ny Mpitarika Faratampony Khamenei sy ny mpanorina ny Repoblika Islamika, Ayatollah Khomeini efa maty, niray tsikombakomba amin'ny famelezana ny fanjakana ary hoe namoaka sary vetaveta i Shirazi. Tamin'ny herinandro teo, nilaza tamin'ny Hetsika Iraisam-pirenena misahana ny Zon'olombelona ao Iran i Shirazi fa tamin'ny dingana ara-pitsarana, tsy navela hahazo mpisolovava izy, nalaina am-bavany amin'ny fiainana manokana ary voampanga amin'ny heloka tsy nataony. Nilaza i Shirazi fa ny pejy sahaniny ao amin'ny tambajotra sosialy dia tsy politika ary natokana ho amin'ny fampitan'olontsotra vaovao.
Thailandey Mpanao gazety nogadraina noho ny “fanakorontanana ny fandriampahalemana sy ny filaminana” tao amin'ny media sosialy
Notazonin'ny tafika Thailandey ilay mpanao gazety menavazana Pravit Rojanapruk noho izy voalaza fa namoaka vaovao tao amin'ny aterineto izay “manakorontana ny fandriampahalemana sy ny filaminana”. Fanindroany izay no nanagadran'ny manampahefana ao Thailandy an'i Pravit, mpanao gazety zokiny ao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro amin'ny teny Anglisy “The Nation”.
Manolotra soso-kevitra fanarahamaso ataon'ny fanjakana ny Parlemanta Aostrisy
Amin'ny tapaky ny volana Oktobra, hifidy ny lalàna mampiadihevitra “Staatsschutzgesetz,” na Lalàm-Piarovana ny Fanjakana izay hametraka sampan-draharaha fanaraha-maso folo vaovao (iray federaly, sivy faritany) ny parlemanta Aostrisiana ary nanome azy ireo fahefana mihoa-pampana hanara-maso ny olom-pirenena tsy dia misy idiran'ny fitsarana loatra. Milaza ny lalàna fa ny tahiry rehetra voahangona amin'ny alalan'ny fandaharana dia tsy maintsy tehirizina ao amin'ny foiben'ny tahiry mandritra ny dimy taona farafahakeliny. Mandrisika miharihary ny fiarahamiasa amin'ny sampam-pitsikilovan'ny vahiny ihany koa ny lalàna. Novolavolaina taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tao Paris sy Copenhagen tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny lalàna, ary niteraka tsikera mahery vaika avy amin'ny andrim-panjakana Aotrishiana maro sy avy amin'ny vahoaka. Efa nahangona sonia maherin'ny 12.000 ny fananonan-tsonia manohitra ny Staatsschutzgesetz izay nokarakarain'ny vondrona mpiaro ny fiainana an-takonana Aotrisiana AK Vorrat
Nahazo fanohanana avy amin'ny mpamaky boky sy ny mpankafy aterineto ny mpandefa fonosana [routeur] Onion
Efa ela ny trano famakiam-boky no mpanohana ny fahazoam-baovao malalaka sy ny fiainana an-takonana, ary nitsangana hatrany hiaro ny zon'ny mpanjifany ho fiarovana ny fahazaran'izy ireo mamaky teny any an-takonana. Nandray endrika vaovao izany ady izany vao haingana raha nantsoin'ny Departemantan'ny Fiarovana Atitany tamin'ny alalan'ny sampan-draharahan'ny polisin'izy ireo ao an-toerana ny tranomboky iray any Etazonia ao amin'ny fanjakana ao New Hampshire, izay voalohany manerantany nandray anjara tamin'ny tambajotra fiseraserana tsy voatsongodia amin'ny aterineto Tor sy manome alalana ireo mpanjifa hampiasa ny tambajotra amin'ny alalan'ny teknolojia fampitàn'onja. Taorian'ny fihaonana teo amin'ny polisy ao an-toerana sy ny manampahefan'ny tanàna, naka hevitra tamin'ny filankevi-pitantanana ao aminy momba ny raharaha ny tranomboky. Nanaiky ny hamerenana indray ny fandraisany anjara amin'ny Tor ny mpitantana azo itokisana ao amin'ny tranomboky.
Nanome sata “Anaran-tSehatra Fampiasa Manokana” ho an'ny habaka .onion ny Internet Engineering Task Force sy ny Internet Assigned Numbers Authority, ahafahan'ireo mpitantana habaka ao amin'ny Tolotra Miafina an'ny Tor amin'ny alalan'ny fampiasana sertifikà SSL sy TLS. Tokony hiafara amin'ny fanatsarana lehibe eo amin'ny fiarovana ny habaka [teboka] .onion ny hetsika.
Namoaka andian-dahatsary “Global Threats to a Free Press, (Fandrahonana Manerantany ho an'ny Gazety Malalaka” izay ahitana lahatsary fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpanao gazety telo, bilaogera, mpaka sary sy mpikatroka manerantany izay niatrika fandrahonana mivantana noho ny asan'izy ireo ny Washington Post. Anisan'ny hita ao anatin'ny lahatsary ireo mpanoratra ato amin'ny Global Voices Endalk Chala (Etiopia) sy Ali Abdulemam (Bahrain)
Nandray anjara tamin'ny fanatontosana ny lahatsoratra i Juan Arellano, Mary Aviles, Ellery Roberts Biddle, Sam Kellogg, Hae-in Lim ary Sarah Myers Wes
Misorata anarana hahazo mailaka avy any amin'ny Netizen Report